नेतृत्वको टकरावले प्राप्त उपलब्धी संकटमा !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेतृत्वको टकरावले प्राप्त उपलब्धी संकटमा !
डिसी नेपाल , १७ अषाढ २०७६
नेपालमा सबै जसो राजनीतिक दलमा यतिबेला नेतृत्वबीच टकराव देखिएको छ। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएर संघीयतामा गइसकेपछि पनि संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संवैधानिक निकायले संविधानसम्मत काम गर्न नसक्नु, संविधानले दिएको जिम्मेवारी संवैधानिक निकायले पूरा गर्न नसक्नुको कारण सबै जसो राजनीतिक दलमा देखिएको नेतृत्वको टकराव हो।
सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्वमा रहेका अध्यक्षद्वयको टकराव जुन प्रकारले देखिएको छ, त्यसलाई हेर्दा र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको टकराव हेर्दा यो संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र संविधानलाई असफल बनाउने खेल चलिरहेको त होइन भन्ने आशंका देखिएको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार यसअघि २०१५ सालमा पनि अफाप सिद्ध भयो।
र, अहिले २०७५ सालमा पनि नफाप्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। एकथरी राजा बिना मुलुकको संरचनागत रुपमै स्थायित्व नहुने रहेछ र सांस्कृति रुपमा नै भएपनि धर्म सापेक्ष हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको आवश्यकता रहेछ भन्न थालेका छन्। यसरी हेर्दा धर्म चाँहि आउँछ, राजा आउँदैन वा धर्म र राजा दुवै आउँछन् भनेर अड्कल काट्न थालिएको छ।
कांग्रेस त्यतिबेला मात्र आउँछ, जतिबेला उ संगठित बन्छ। आम जनताले भरोसा गर्न र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वास गर्न योग्य हुनलाई अब यो एजेण्डामा कांग्रेसले वहश चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन।
नेपालको सन्दर्भमा नेपालका मित्रराष्ट्रले पनि नेपालमा स्थायित्व चाहेका छन् र त्यसकालागि हिन्दू राज्य र सांस्कृतिक राजा चाहिन्छ भन्न थालेको चर्चा सुनिन्छ। संविधान कार्यान्वयन नहुनु, नेताहरुमा पद र शक्तिका लागि लुछाचुँडी, आफू र आफ्नाका लागि मात्र कमाउ भन्ने नेताहरुको व्यवहारबाट जनता आक्रान्त छन्, त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलमा देखिएको नेतृत्वको टवराव हो।
यो टकरावका कारण संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र राजनीतिमा अर्को परिवर्तन हुन सक्ने आशंका देखिन थालेको छ। यतिबेला नेपाली जनता र विदेशी मित्र राष्ट्रको नजरपनि नेपाली कांग्रेसतर्फ नै केन्द्रित छ। नेपाली कांग्रेसका सभापतिले अब गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तै गरी त्याग देखाउने बेला आएको छ। उहाँले अब ऐतिहासिक हुने अवसर प्राप्त गर्नु भएको छ।
नेतृत्व उपयुक्त जायज व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। होइन, यो भन्दा अगाडि बढ्ने हो भने ऐतिहासिक बन्नुस्। नहिच्किचाइकन सनातन हिन्दु राज्यको एजेण्डा र अधिकारविहीन राजाको एजेण्डा बोक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र उहाँको अर्को काम पनि बाँकी रहेछ भन्ने देखिन्छ र पुष्टि पनि हुन्छ। होइन भने नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।
नेपाली कांग्र्रेसले आगामी दिनमा संविधान संशोधन, आम जनतालाई सुशासन दिन र लोकतन्त्रको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रत्याभूति आम जनतालाई गराउन अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि अहिलेको जस्तो न आफूले गर्ने न बाटो छोड्ने पारा नेतृत्वले त्याग्नुपर्छ । नेतृत्व आफ्नो भविष्यको कार्यदिशामा स्पष्ट हुनुपर्छ साँच्चै भन्दा अहिले कांग्रेस एजेण्डाविहीन छ।
सडकमा उठ्ने झिनामसिना कुरालाई बोकेर त्यसैलाई एजेण्डाको रुप दिने प्रयास भएको देखिएको छ। किनकि यी कुराहरु आज उठ्छन् र एक महिनामै शान्त हुन्छन्। त्यस्ता कुराको पछि लागेर कांग्रेस कहिलेसम्म टिक्ने? आज कांग्रेसले एउटा कुरालाई आफ्नो एजेण्डाको रुपमा बोकिरहेको हुन्छ। एक महिनापछि त्यो विषय पूरै बेपत्ता भएर अर्को विषयमा कांग्रेसले वकालत गरिरहेको देखिन्छ।
यसो हुनुको मुख्य कारण कांग्रेससँग दीर्घकालीन ठोस एजेण्डा नहुनु नै हो। अधिकारविहीन राजसंस्था र धर्म सापेक्षता कांग्रेसको लागि अहिले ठोस एजेण्डा हुन सक्छ तर यस विषयमा कांग्रेस प्रस्ट हुनुपर्छ। खहरेको भेलजस्तै एक्कासी ‘भाइरल’ भएका विषयमा हाम्फालेर एकैछिन होहल्ला गरेर फेरि सामसुम हुने कांग्रेसको शैलीले यसको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ।
यस्ता झिनामसिना भाइरल विषयलाई छोडेर देशको नेतृत्व लिने हिसाबले ठोस एजेण्डा बोकेर कांग्रेस अगाडि बढ्नु जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस त्यतिबेला मात्र आउँछ, जतिबेला उ संगठित बन्छ। आम जनताले भरोसा गर्न र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वास गर्न योग्य हुनलाई अब यो एजेण्डामा कांग्रेसले वहश चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन।
त्यसकालागि सबैले विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ। त्यसकालागि अब कांग्रेस सच्चिनुपर्छ, त्यसको सुरुवात अब नेतृत्वबाट सुरु हुनुपर्छ। सभापतिले त्याग देखाएर त्यसको सुरुवात गर्नुपर्छ। संघीय संरचना अनुरुप प्रादेशिक, स्थानीय कांग्रेस गठन हुनुपर्छ । केन्द्रको कांग्रेस बलियो हुनुपर्छ।